Ebee ka ndị na-ere ahịa n'Intanet na-amalite Ịzụ ahịa ha? Ọkachamara Semalt Na-eweta Nchọpụta Dị Oké Ọnụ Ahịa
Ịdere ihe ọ bụla n'ozuzu onye na-azụ ahịa nwere ike ịzụta ya n'Ịntanet. Nke a n'ogologoa na-eji ihe eji eme ihe maka ihe ọ bụla na ọtụtụ puku ndị na-ere ahịa na-achụpụta ngwaahịa ahụ n'otu oge.
Onye Nlekọta Ọrụ Ndị Ahịa nke Ọkachamara Ọrụ Ntanetị, Frank Abagnale, na-akọwa ebe ụlọ ahịa ịntanetị na-amalite ikpochapụ njedebe a.
Ebee ka Amalite
Na 2016, nnyocha ntanetị a na-eji n'ịntanetị nke Nyocha Ike gosipụtara gosiri na ọtụtụndị na-ere ahịa na ịntanetị na-amalite ọchụchọ ha maka ihe dị mma ma ma Amazon ma Google. Nke a mechara jiri pasent 35 nke ndị ahịa niile na-agba akwụkwọewere òkè 38%. N'otu aka ahụ, pasent 21 nke ndị na-azụ ahịa na-ahọrọ ịmalite nyocha ha n'ime ụlọ ahịa e-azụmahịa ndị ejikọtara na ụdịrị ụdị - application development company.N'aka nke ọzọ, eBay na-eburu 6% nke otu a dịka ebe ha na-ahọrọ ahịa. Ihe nchoputa nke mere ka obi uto di n'uwa, ebe obunke otu ụlọ ọrụ a ma ama mara nke a na-ahụ maka nlezianya bara uru, Fim na ọrụ ịza ajụjụ na azịza. Akuko ha nwetarammasị site na ndị ahịa e-azụmahịa dị ka ndị ahịa ahịa dijitalụ.
Izi ezi nke Ike Nyocha 'mechara chọpụta mgbe e mesịrị otu afọ ahụcomScore mere ọtụtụ ọmụmụ banyere omume azụmaahịa. Nnyocha a abụghị nanị na e kwuru na njem ọchụchọ maka ndị na-ere ahịa n'Ịntanet kamakwandị ahịa na-adịghị anọchite anya. N'ime nchọpụta ha, pasent 27 nke ndị ahịa azụ laghachiri Amazon maka njem mbụ ha..Ụlọ ọrụ ọchụchọ ndị ziri ezi ruru 15%dị ka nkwụsị mbụ maka ndị ahịa. N'ụzọ na-adọrọ mmasị, pasent 13 nke ndị nabatara tụgharịrị gaa n'èzí ndị na-ere ahịa na-ere ahịa maka ihe ndị ha chọrọọzọ 14% na-agbanye na ebe nrụọrụ weebụ na-ere ahịa. Ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa na-egosipụta na nyocha ahụ na 4%. Narị Afọ Iri na-aga n'ihunhọrọ dị elu maka ịzụ ahịa n'ịntanetị karịa ndị ahịa na-eto eto. Nanị ihe dị ịrịba ama dị n'etiti nchọpụta abụọ ahụ bụ obere ala site na ọchụchọengines ebe a.
Ka o sina dị, anyị na-abịa ná njedebe nke njikarịcha search engine naAmazon dị ka isi nhazi maka azụmahịa dijitalụ, ịmepụta mmasị na ịtụgharị okporo ụzọ n'ime ahịa. Ọ bụkwa ebe maka ịkpụ-akpịrịasọmpi n'ụdị ahịa na ahịa agha dị ukwuu. N'agbanyeghị ọnụ ọgụgụ, ụlọ ọrụ nwere ike ịme ihe na nhazi abụọ anwere ike iru uzo ruru 73% nke ugwo ahia ha n'ile anya. Ihe nlereanya buru ibu ga-abụ akpụkpọ ụkwụ ndị ikom dị elumkpokọta na Google. Ebe nrụọrụ weebụ a nwere ike ịmepụta mmasị na pasent 35 nke ndị ahịa ahịa online na Google na nke ọzọ 38% na Amazon. Ọnụ ọgụgụ ndị ana-anọchite anya ọtụtụ nde dollar n'ịzụ ahịa ma nweta uru.
Omume SEO ga-enyere ndị ọrụ aka n'ịntanetị aka iji nweta ọkwa ha na Amazonna nyocha anya. Ebumnuche bụ isi bụ ebe a ga-anakota ma kpatụ ndị ahịa zoro ezo na mmalite nke njem ịzụ ahịa n'ịntanetị. Ijiiji mezuo nke a, ịchọrọ ịchọta nkọwa zuru ezu nke ngwaahịa zuru ezu na ogo ọdịnaya na nkọwa zuru ezu na ezi ngwaahịa. Ọdịnaya dịeze na SEO ka i wee ghara imebi onodu data na nkọwa ị na-eji.
N'agbanyeghị na ọdịnaya, tinye mkpụrụokwu dịka ya na okwu ndị a na-eji ngwaahịankọwa gosipụtara ihe ndị ahụ ndị ahịa gị na-eji kọwaa ika gị ma ọ bụ ngwaahịa gị. Ọzọkwa, mee ka ahịa, ahụmahụ ndị ahịa, na nyocha anyaiji nyere aka n'ịgbanwe ahịa. Otu atụmatụ ahụ na-emetụta weebụsaịtị ebe e-commerce ọ bụ ezie na nke ọzọ nwere ike imeziwanye na ụlọ,akụrụngwa, na ahụmahụ nke onye ọrụ weebụ.